malagasy | Orange Madagascar
Actualités - régions - malagasy
Sampana Lehilahy Kristiana-Fihaonambem-pirenena tao Mahajanga: maherin’ny 8000 ireo tonga
Mila mijoro ny lehilahy kristiana ary ny loha-laharana dia ny fampandrosoana ny fiangonana sy ny firenena. Io no lahateny nasongadin’ny Filoham-pirenena Malagasy, Atoa Hery Rajaonarimampianina raha nandray fitenenana nandritra ny fotoam-pivava...
Boeny: vita sonia ny Satan’Andraikitra momban’ny «Drafim- panajariana ny faritra» sy ny «Drafitra Ifotony fanajariana ny tany» miisa 13
Vita sonia ny Zoma 31 mars 2017, tao amin’ny hotely Les Roches Rouges Mahajanga ny Satan’Andraikitra momban’ny «Drafim- panajariana ny faritra» na SRAT ho an’ny faritra Boeny sy ny «Drafitra Ifotony fanajariana ny tany» na SAC ho an’ireo Kaomin...
Mahajanga : ny sekoly voaharo, fanabeazana mirindra sy mahomby
Mahajanga : ny sekoly voaharo, fanabeazana mirindra sy mahomby. Izay no tanjona napetraka tamin’ny fanaovana ny fifanakalozan-kevitra mikasika ny fampandrosoana ny lalàna mifehy ny fitondrantena (Code de conduite) sy ny famolavolana ny tetik’as...
Nodimandry ny Ben’ny tanànan’ny kaomina ambanivohitr’I Belobaka
Nodimandry ny talata maraina tao Antananarivo ny Ben’ny tanànan’ny kaomina ambanivohitr’I Belobaka, Rtoa RAVONIARISOA Martine.
Ao amin’ny distrikan’i Mahajanga II no misy io fari-piadidiany io. Narary efa herinandro maromaro ny tenany, k...
Akon'Antsiranana, 05 janoary 2017
Fantatra izao fa hanolotra "couveuse" ho an’ny hopitaly CHRR Besopaka ny solombavam-bahoaka Zoky Vonjy, voafidy tao Sambava. Araka ny vaovao azo ihany koa dia ho avy tsy ho ela ny "Scanner" ho an’io Hopitaly io. Mahatsapa ta...
Akon'Antsiranana, 04 janoary 2017
Miakatra tampoka ny vidin’entana ao Bazarikely, roa andro aorian’ny taom-baovao. Ny vokatra avy any amin’ireo tantsaha no tena ahitana fisondrotana satria tsy dia misy firy ny vokatra tonga ao an-tsena noho ny filazana fa mifety mandritra ny he...
Hopitaly Androva: nahazo kodoro 20 avy amin’ny mpianatra
Kidoro miisa 20 no natolotry ny fikambanan’ny mpianatra iray ho an’ny hopitaly Androva ny alarobia 28 desambra 2016 teny amin’ny Hopitaly PZaGa Androva Mahajanga. Tonga nandray ny fanomezana ny Lehiben’ny Faritra Boeny, Atoa Saïd Ahamad Jaffar,...
Akon'Antsiranana, 27 desambra 2016
Fantatra fa hotokanana amin’ny 15 janoary ho avy izao ny birao vaovaon’ny kaominina Ambilobe. Fety lehibe no karakaraina amin’izany izay iarahana amin’ny tarika Wawa.
Akon'Antsiranana, 20 desambra 2016
nitsidika an'Ambanja sy Ambilobe tamin’ny faran’ny herinandro teo ny ministry ny Filaminam-bahoaka, Anandra Norbert. Tamin’ireo toerana rehetra nolalovany ireo dia namory ireo polisy sy OMC (Organe mixte de conception) hatrany izy. Nifoto...
Akon'i Toamasina, 17 novambra 2016
Iray volana latsaka izay no nisy nanafika tao an-tokatranony teny Tanandava ny lefitry ny ben’ny tanàna Toamasina faharoa ka lasan’ireo jiolahy nirongo fiadiana mahery vaika, izay niditra an-keriny tao an-tranony ny vola sy ny fitaovana mora n...